Booska: Wakiilka Adeegyada Diiwaangelinta (Laba luqood) - Cuntooyinka Luqadaha
Goobta: Wakiilka Adeegyada Diiwaangelinta (Labada-Luuqad)
Faafida waxay kordhisay tirada macaamiisha Cunnada on Wheels u adeegto. Waxaan raadineynaa qof firfircoon oo naxariis leh si loo hubiyo in macaamiisheena ay usii wadi karaan helitaanka cuntada. Mawqifkani wuxuu aasaas u noqon doonaa bixinta taageerada waayeelka iyo daryeeleyaasha iyadoo la qiimeynayo u qalmiddooda MN Medicaid, iyo barnaamijyada Ka-dhaafida ee la xiriira. Wakiilka Adeegyada Diiwaangelintu wuxuu ka caawin doonaa macmiisha cusub iyo kuwa hadda jira xulashooyinka ay ka heli karaan bulshada dhexdeeda, wuxuuna ka caawin doonaa hagidda nidaamka dalabka. Waxaan raadineynaa Wakiilka Adeegyada Diiwaangelinta oo saaxiibtinimo leh, oo si naxariis leh ula shaqeeya xubnaha qoyska iyo kuwa dakhligoodu yar yahay iyo ilaha / gargaarka ay heli karaan. Maaddaama Metro Meals on Wheels ay sii wadayso ballaarinta wacyigelinta bulshada dhexdeeda, booskani wuxuu u baahan yahay inuu si fiican ugu hadlo labada Ingiriis iyo mid ka mid ah luqadaha soo socda: Soomaali, Hmong ama Isbaanish.
Laba luqadle ayaa loo baahan yahay